အိုင်တီဒွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အိုင်တီဒွေ
Posted by Kaung Kin Pyar on May 30, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 33 comments
တွေ့ဖူးသမျှ အိုင်တီတွေ တစ်ယောက်မှကို မကောင်းဘူး….။ အကုန် ဂျစ်ကန်ကန်၊ မှုန်တေတေ၊ ထုံပေပေတွေချည်းပဲ….။
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် အလုပ်တွေမနိုင်မနင်းများနေတဲ့ မျက်နှာသေတွေနဲ့ ..။ ကွန်ပြူတာစခွင်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေတာများ.. ပေါက်ထွက်တော့မယ့်အတိုင်း။ အကြောင်းမသိသူတော့ ဒီလူအတော်ကြိုးစားတာပဲ ထင်မှာ..။ မသိရင်ပဲ ကုမ္ပဏီဲရဲ့အနာဂတ်က သူတို့လက်ထဲပဲရောက်နေသလိုလို…။ သရုပ်ဆောင်က တော်ချက်…၊ ဒါရိုက်တာဝိုင်းကိုတောင် ပြန်သင်လို့ရတယ်…။
Fixed Assest လေးစစ်ချင်လို့ ပစ္စည်းအဟောင်းအမြင်းလေးတွေ စတိုထဲပို့ပေးပါ ပြောတာကို တစ်ပတ်။ ထမင်းစားဖို့တော့ မမေ့၊ ဒါတော့ နေ့တိုင်းမေ့တဲ့ အိုင်တီနဲ့လဲ ကြုံဖူးတယ်..။ ကွန်ပြူတာလေး ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိ၊ လာကြည့်ပေးပါပြောရင် ဈေးက ကိုင်ချင်သေးတယ်..။ လာပြီခဏ က တကမ္ဘာလောက်ကြာတယ်..။
ဟိုဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်း Network ချိတ်ပြီး ဒိုတာခုတ်လားခုတ်ရဲ့….။ ရာသီဥတုလေးများပူလာရင် ဆာဗာကြီးပဲ မီးထတောက်တော့မလိုလိုနဲ့ ဆာဗာခန်းဝင်ပြီး ဟောက်သံတောင်ထွက်နေတဲ့ အိုင်တီလဲ ရှိရဲ့..။
စားပွဲပေါ် Printer, Mother Board အစုံတင်ပြီး ဘန်ကာ၊ ကတုတ်ကျင်းလုပ်ထားတာမျိုး၊ အခန်းဝင်ဝင်ချင်း မူလီအတိုအစတွေ စပလိန်အတိုအစတွေချချပြီး ထောင်ချောက်ဆင်တာတွေရော…..
ဆင်ပေမပေါ့….။ ရှိသမျှဆိုဒ်တွေ အကုန်ကြည့်ပြီး ပေါ်သမျှမော်ဒယ်တိုင်းကို စိတ်ကူးနဲ့ ထိုင်ပစ်မှားနေကြတာ…။
အာ့ပြောတာ…။ အိုင်တီတွေ ကောင်းကိုမကောင်းဘူး…။
ဒီကြားထဲ တခြားသူအပေါ်တော့ ကောင်းနေပြီး နာ့တစ်ယောက်ထဲကွက်ကွက်ပြီး မကောင်းတဲ့အိုင်တီက ရှိသေးတယ်…။ မွေးရာပါ ဦးနှောက် (၂)ခန်းပုပ်နေတဲ့ လူဂျီး…။ သြော်…ငါ့ဘွ ….။ ကွကိုယ်တောင် အတော်သနားထှာ…..။
အွင်းးး ပြောချင်တာလဲ စုံသလောက်ရှိပြီ…။ ကျန်တယ်ထင်မှ လာပြန်ပြောတော့မယ်…
ဒီလိုပြောတာ …ကျုပ် ကို မမြင်ဖူးသေးလို့ နေမယ်..
မြင်ဖူးရင် အော်ကျောလန်မှာ… ပြောမလို့ပါ..
ပထမဆုံးရေးထားသော တွေ့ဖူးသမျှ ဆိုသည့်စာသားအစား ကြုံဖူးသမျှ ဟု ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးဂျဘာ ချစ်လှစွာသော ရွာသူားများရှင့်
ချစ်စနိုးနဲ့ ဖဲ့တာမို့ အဖဲ့ခံရသူဂျီးတော့
ပြုံးစိစိ ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်သေးတော့သည်. . . .
ဘူလဲကွအဲ့ဒါ ? ? ?
ငင့် ဒါ ရန်စ ထားတာလေ ကိုဒညင်းဝက်ရဲ့။ ချစ်စနိုးဦးပြောတယ်များ ထင်နေလား။ ဟုတ်ပါဘူး၊ ချစ်စနိုးပြောတယ်များ ထင်နေလား။
ပြောလက်စနဲ့ တစ်လက်စထဲ ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်။
စိတ်က ပုပ်စုတ်လို့ စိတ်ထဲက လောက်ထွက်တော့မယ့် အဲ့ဒီလူဂျီး…
အာ့ဒွေအကုန် တပြိုင်တည်း စုပြုံဖြစ်ဘာဇေ
လဂါးဘာ လုလုရယ်…ကန်ပနီပိုက်ဆံ ညာယူနေဒဲ့လူဒွေ။ မေတ္တာကို မရှိဘူးးး
ကောင်းကင်ပြာ ကန်ပနီထောင်ရင်လေ…အိုင်တီတွေစခွင်ကိုချိန်ပြီး စီစီတီဗီ တပ်ထားမယ်။ မော်ဒယ်ဒွေ ပုံပဲ ထိုင်ကျိနေလို့ဂတော့လားးး ဒင်းတို့ကို ဂျင်းစကဒ်အတိုနဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းဝတ်ခိုင်းပြီး ရုံးကို ၇ပတ် ပတ်ခိုင်းပလိုက်မယ်…ငွင်းငွင်းငွင်းးး
မရှိမဖြစ်မိုး ပါကွယ်။ :-)))
အခုတော့ မိုင်တိုင် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့မလား။
ကျန်ခဲ့ပြီ လို့ ထင်ရတာဘဲ။
အရီး က ကရင်ပြည်နယ်စပ်မှာ မွေးတယ်။
အမေ့ဘက်က အဖိုး က ရှမ်းစပ်သလားဘဲ။
ကောင်းကင်ပြာလဲ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်သွားလည်ချင်တယ် အရီးရဲ့။ ဇာတိက မအူပင်အကျော် ကျွဲဒုံးဆိုတာ။ တောင်အောက်ပေါ့။ ငယ်ငယ်ကပဲရောက်ဖူးတယ်။ တောင်ပေါ် ကရင်တွေကြား ထပ်သွားချင်သေးတယ်။ ကိုဒညင်းဝက်လို။
အရီးက ရှမ်းစပ်တာလား။ ဒါဆို ချောမှာပဲ။ ကောင်းကင်ပြာက ရှမ်းမလေးတွေကို ချစ်တယ်။
ကရင်ပြည်နယ် ဘာအံဘက် မြိုင်ကြီးငူဘက်က ရှုခင်းတွေကို အချစ်ဆုံးး
လွမ်းတယ် ဇွဲကပင်နဲ့ တောင်ထီးထီးမားမား မြင်ါမြင့်မှိုင်းမှိုင်းကြီးတွေရယ်
ရှုခင်းသာတဲ့ဘက်တွေညွှန်းလို့ ကျေးကျေးပဲ ကိုဒညင်းဝက်ရေ။ သွားဖြစ်ရင်တော့ အဲ့ဘက်တွေအရင်သွားမယ်။
တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ ကိုယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာတွေ သွားချင်တယ်။
ဟွင့် ပိုစ့်တွေ ရောသမမွှေကုန်ပြီ။ ဒီဘက်ပြန်လှည့်မှပဲ။
အရီးပြောတဲ့ အိုင်တီကမရှိမဖြစ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ် အဟဲ။
ဒါပေသိ သိလား၊ သူတို့ပဲ စားကောင်းသောက်ကောင်းအောင် ဟိုလူ မယ်မိုရီစတစ်လာပေး လက်ခံ၊ ဒီလူမယ်မိုရီစတစ်လာပေးလက်ခံနဲ့ ဖြန့်ဝေရေး လုပ်ကြတာ။ အဆိပ်ပင်ရေလောင်း၊ လူမိုက်အားပေးတွေ။
ဒါကိုပဲ မလုံမလဲတွေဖြစ်ပြီး ဟိုအမှုပေါသလေး၊ ဒီအမှုပေါသလေးနဲ့ လူရှေ့ထွက်လာပြီး အရင်ဦးအောင် အော်ကြတာ။ အံ့ပါရောလားး
ဟင် စော်ပဟ… ကျုပ်လဲ အိုင်တီ ငအ ပါဗျာ…
user တွေဒုက္ခပေးတာလဲ ခံလိုက်ရသမှ…. ဘာမဟုတ်တဲ့ ပတ်စ်ဝက်မှားနေတာက အစအဆုံး လိုက်ရှင်းပေးရတာ.. ပတ်စ်ဝက်ကဘယ်ရိုက်ရမဒုံး Caps Lock ကြီးဖွင့်ရိုက်နေရတာကို.. ဒီကြားတဲ့ လမ်းဖြတ်မလျှောက်လိုက်နဲ. စက်အသစ်လဲပေးဆိုတာချည်းပဲ.. တနေ.တနေ. သုံးထပ်ကို အောက်ဆင်းလိုက်အပေါ်တက်လိုက်… လုပ်နေရတာ… အရပ်တောင် တဖြည်းဖြည်းပုလာသလိုပဲအေ….
ပြသနာတွေကတော့ အကြီးကြီးတွေချည်းပဲ… နတ်ဝက်မရလို.သွားကြည့်. နတ်ဝက်ကြိုးလွတ်နေတာတို.
မော်နီတာ မလာလို.သွားကြည့်… ခလုပ်ပိတ်နေတာတို…
မောက်က အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး လဲပေးဆိုလို.သွားကြည့်…. ကေဘယ်လ်လွတ်နေတာတို…
အမယ် မော်နီတာ စခရင်ရှေ.မှာ အလကားထိုင်ပြီး မော်ဒယ်ပုံပဲ ကြည့်နေရတယ်ပြောသေးတယ်… ပြီးရင်သူတို.ပဲ…. ဟို မေမြတ်မွန်လေးရှိရင်လုပ်ပါအုံး…. ဟယ် သဇင်တဲ့တော့ ရှိလားတို…. ဟိုမော်ဒယ်လေးလန်းတယ် ရော့ မန်မိုရီစတစ်တို…. သူတို.ကပဲပြောရတယ်ရှိသေးတယ်….
အိုင်တီများ မုန်းသလေးဘာလေးနဲ… အမလေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးအရပ်ကတို.ရေ.ကြားလို.မှကောင်းကြသေးရဲ.လား…. အိုင်တီသမားတွေများ အိမ်သာလို.ပဲ ဗိုက်နာမှ သုံးကြတာပါအေ…………… အံ့သြဘာ…
ဒီကလဲ user တွေကို သိပ်ကိုချစ်နေတယ်ထင်နေလား………………….ဟွန်. မုန်းထာအေ…
အဲဒီ အိုင်တီ ဆိုတာကြီးသာ ဒီကမ္ဘာမှာ ပေါ်မလာရင် ဂဇက်ဆိုတာလည်း ဖတ်ရမှာမဟုတ်
ကောင်းကင်ပြာ ဆိုတာ ကရင်စပ်ကလေးဆိုတာလည်း မည်သူမျှ သိရမည်မထင်
သိမ်းကြုံးပြီး မရမ်းပါနဲ့ကွယ် ၊
ဟေးဟေး တိုက်ဆိုင်သွားရင် ဒဲ့လို့မှတ်ပါဦးလေး
ဒီဂဇက်ထဲမှာလဲ အိုင်တီသမားတွေက ထက်ဝက်မကရှိနေပြန်တယ် ။
ကျုပ်တို့သာ ကွန်ပြူတာပိတ်ရင် ပလပ်ဆွဲဖြုတ်တဲ့ကောင်တွေ
ဒီတော့ …… အိုင်တီဆရာများ ခေါင်းဆင်းနင်းခံရသလိုဖြစ်တော့မှာဘဲ ဟဲဟဲ
ဘင်းဂလားနယ်စပ်နဲ့အပြိုင် ပစ်သံခတ်သံတွေကြားနေရလို့ ။
ဟိုတစ်ရက်ကပြောတော့ ကားမောင်းဆို…ကိုရွှေတိုက်စိုး အိုင်တီမှန်းးး သိမှသိပဲကိုတော်
ကောင်းကင်ပြာပြောတဲ့ထဲ ကိုရွှေတိုက်စိုးလို လူလိမ္မာမျိုး ပါပါ့မလားလို့..စင်းစားကျိ စင်းစားကျိ…အဟဲ
ဟွန်. အဲလိုပြန်ချောတော့လဲ ပျော့ဘီပေါ့အေ… ဟေးဟေးဟေး…
အူးညိုးရေ စိတ်လျှော့နေပါပြီ စိတ်လျှော့နေပါပြီ။ ပြောစရာလဲ ကုန်သလောက်လောက် ရှိသွားလို့။ အဟေးဟေးးးး
ဦးမျိုးက အိုင်တီမဟုတ် ကိုSurmi ရေ…။ ဦးမျိုးက MICTသွားပြီး ဘော..ဘောပွဲကျိတာ။ တချက်တချက်လဲ ထထဖောက်ပြီး ဒက်စတော့ပေါ် ပုံဒွေတင်သေးတယ် ဟေးဟေးးး
တော်ပြီ ဝိုင်ကေကေအိုမှာ မုန့်ကျွေးမလို့ဟာ ၊
ဖက်ထုပ်ကတ် ဆိုလား ..အဲ့ …၄လုံး၆ဖက်ကြီးကို
ထိပ်ဆုံးထား ချဉ်ဗျ…။ သိယား….
မဆလ ခေတ်က စကားငှားပြောရရင်
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ လူတန်းစားထဲ ထိပ်ဆုံးပါတဲ့ … လူယီး…
ပြတင်းပေါက်နဲ့ ထမင်းစား ပီး အကောင်းမပြောတဲ့အပြင် …ပန်းသီး သုံးတဲ့ ဘူဇွာကြီး…
ဆမ်ဆီ ..ကို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး လုပ်တဲ့လူ …..
ယုစ့်လေး အကြောင်းတွေးမိတိုင်း …ဒီလူယီးကို ဒေါသဖြစ်တယ်ဗျာ ….
ဟယ် ယောက္ခမကလဲ၊ ဒဲဒီကလဲ၊ အပုဂျီးကလဲ လူစုံတုန်းလေးရှင်းပြတာ မငြိုငြင်ဘာနဲ့ နော် နော်။
ဟင် ကိုဖက်ကက်လဲ အိုင်တီလားးး ကိုSurmi ဟင့်စ်ပေးသွားကတည်းက ကျောတော့ချမ်းနေသားးး ဖုန်းထဲက လက်သီးတွေ ထွက်မလာနိုင်လို့သာ ဒီဂလောက် တောင့်ခံထားနိုင်တာ။
ဒီကြားထဲ တခြားသူအပေါ်တော့ ကောင်းနေပြီး နာ့တစ်ယောက်ထဲကွက်ကွက်ပြီး မကောင်းတဲ့အိုင်တီက ရှိသေးတယ်…။ မွေးရာပါ ဦးနှောက် (၂)ခန်းပုပ်နေတဲ့ လူဂျီး…။
အိုင်ထဲကတီကိုဘာကြောင့်စိတ်နာနေရတာလဲ ကောင်းရယ် ကင်ရယ် ပြာလေးရယ်
အိုင်ထဲကတီနဲ့ အမျှားခံလိုက်ရလို့ ငါးမျှားချိတ်ဆူးသွားတဲ့ ငါးမလေးက ပြာလေးများဖြစ်နေရော့လားးးးး
အိုင်ထဲကတီခမျာလည်း ဘာမှနားမလည်လိုက်ရပဲ ငါးစားခံ ဘ၀နဲ့ ကိုယ်လုံးကိုထိုးဖောက် အသက်ပျောက်ခဲ့ရရှာတာပါကွယ်
တကယ်ဆို အိုင်ထဲကတီနဲ့ ငါးကိုမျှားတဲ့ တံငါသည်သာတရားခံကွယ့်
အို ဘာတွေပြောနေမိပါလိမ့် (ခရက်ဒစ်တူ အူးကျောက်)
ဒါဆို တရားခံ ဘယ်သူလဲ မရွှေကြည်ရေ။
အိုင်တီ ဆိုတာ မရှိသုံးလေးပါဂျာ… သူတို့ ခင်မျာ user တွေ အဆင်ပြေအောင်…. အမြဲအဆင့်သင့်လုပ်ထားရတယ်… သူတို့ ကတောင်းရင် ချက်ချင်းအမြန်ဆုံး ပီးအောင် လုပ်ပေးရတယ်…. အမြန်ပီးတော့လည်း ဒါလေးများ… ဒီလောက်မြန်မြန် ပီးတယ်…. ဒီလူတွေ ကျန်တဲ့အချိန် ဘာလုပ်နေပါလိမ့်ပေါ့….. အားနေယားနေတယ်ထင်နေတာကိုး…. နေ့ တိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေ…. အချိန်တိုင်း အဆင့်သင့်ဖြစ်နေအောင် ပြင်နေရာတာတွေ မသိရှာဖူး…. အဆင်ပြေသွားရင်တော့ ကယ်တယ်ရှင်ကြီးပေါ့…. ကျန်တဲ့အချိန်ကျတော့…. လူပိုလိုလို…. သူတောင်းစားလိုလို…. သောက်ညင်ကပ်ခံရရှာပေတယ်…. လူကို ခေါ်သုံးချင် တိုင်း သုံးပီး…. ကျန်တဲ့အချိန် မှာ ပစ်ထားတဲ့ user များ… ဘ၀ဆက်တိုင်း ရည်းစားက ပစ်သွားပါစေဗျာ……
မှန်၏ မှန်၏ မှန်၏….
ရင်ထဲမှ ရုန်းကန်ထွက်လာသော အသံတွေပေါ့ ဟုတ်လား ကိုတိမ်မည်းရေ….
ကိုတိမ်မည်း ဆုတောင်းက ဒီဘ၀က စ တာထင်ပါရဲ့……….
အဲ့လို တော့ မရည်ရွယ်ပါဖူး…. ဒါပေမယ့်…. အိုင်တီမှာလည်း နှမ်းဖြူးတဲ့ အိုင်တီ ရှိသလို…. တကယ် ကူပေးတဲ့ အိုင်တီ လည်း ရှိတယ်… စိတ်နှလုံး ဖြူ စင်တဲ့ အိုင်တီ ရှိသလို…. ခိုးဖို့ ဝှက်ဖို့ဒုတ်ခ ပေးဖို့ လောက် ချောင်းနေတဲ့ အိုင်တီ လည်း ရှိတယ်…. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ကူလာတဲ့ လူကိုတော့ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်လို့ကြားချင်တာပေါ့… ကျန်တဲ့ အချိန် တွေမှာလည်း အဲ့လို စကား မပြောရင်တော့ လေးစားမှူ လေးတော့ ရှိစေချင်တယ်…. ဒါပေမယ့် တော်တော် များများက အိုင်တီ ဆိုတာကို နားမလည် ကြဖူး… အိုင်တီ ဆိုတာကလည်း လူ လို အမြဲတမ်း စဉ်းစား လို့ မရဖူး…. တကယ့် အိုင်တီ တော်တော် များများက အလုပ်ကိုပဲ ကုန်းပီး လုပ်တဲ့ အတွက် social အားနည်းတယ်…. အဲ့လို လူတွေ တော်တော် များများက စကား ပြောရင် ဘုဘောက်ကျသလောက် စိတ်ရင်းကောင်းကြပါတယ်… ဒါပေမယ့် လူ ဆိုတာကလည်း social ကောင်း ဖို့ က အရေးကြီးသကိုး…. အလုပ်တွေ ထောင်ချီ အောင် လုပ်ပေးပါစေ… တခါတလေ အပြုံးလေးး တခုကို မမှီဖူး… အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်က အမျိုးသား ဆိုတော့ အမျိုးသမီး user တော်တော် များများနဲ့အဲ့ပြသာနာ ရှိတယ်… ကျွန်တော် မပြုံးတက်ဖူး….. စကားလည်း အဆင်ပြေအောင် မပြောတက်ဖူး…. အဆင်ပြေအောင် ပဲ လုပ်ပေးတယ်…. ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ အချိန်တိုင်း ဘာတွေ တွေးနေရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ပဲ သိတယ်…. အဲ့တော့ အိုင်တီ ဆိုတိုင်း မရမ်းလိုက်ပါနဲ့ ဗျာ…. စာရေးသူက သက်ဆိုင်ရာ ကို ရည်ညွန်းပီး ရေးမှန်း နားလည်ပေးမယ့်…. ကြားထဲက စိတ် တိုလို့ဝင် ကျိန်မိတာပါ….. စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့ နော်….
ကိုတိမ်မည်းရေ…. တစ်ခုလောက် ၀င်ပွားပါရစေ.. အိုင်တီသမားဆိုတိုင်း မပြုံးမရယ်တတ်ရင် လူမှုဆက်ဆံရေး မပြေလည်ရင်တော့ အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဗျာ…
တစ်ခါတစ်လေ user တွေကို အပြုံးလေးနဲ. နှစ်သိမ့်ပေးရင် သူတို.စိတ်ထဲအေးနေတော့ ကိုယ်က ဘာပြသနာဖြစ်လဲ ရှာချိန်ပိုရတာပေါ့… တစ်ချို.ကြတော့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပေမယ့်… စကားလေးနဲ. ပြန်ရှင်းပြ ပေးရင် ပိုလို.အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ…. တစ်ခါတလေ ကိုယ်မှားရင်တောင် ကိုယ်စကားလေးနဲ. ပြန်ဖာရင် အဆင်ပြေသွားနိုင်တာပေါ့ဗျာ….
အိုင်တီသမားတွေ မာနကြီးတယ် ဆရာကြီးအထာနဲ.နေတယ်.. အဲလိုစကားတွေက အဲလို စကားအဆင်ပြေအောင်မပြောတတ်တာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဗျ… ဟုတ်တယ်ဟုတ်
အခုလို အကြံပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်လည်း ပြုံးပြုံးလေး နေပါတယ်…. social လည်း တက်နိုင်သလောက် ကောင်းအောင်နေပါတယ်… သို့ ပေသိ အိုင်တီ အများစုကတော့ တခြား sales, marketing, admin and finance တို့ ကလူတွေလောက်တော့ social မကောင်းတာ အမှန်ပါ… အများနဲ့ ယှဉ်ရင် ညံ့တယ်လို့ ခံစားရလို့ညံ့တယ်လို့ ပြောတာပါ… ရှိသင့်ရှိထိုက်သလောက်တော့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ….
အိုင်တီတိုင်းကို ဂြိုလ်သားလို့ မြင်နေကြတဲ့လူက များနေတော့ ခက်သား….
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ… သူနာပြုတွေ… ဒေါက်တာတွေ ရှိတယ်… လူမလောက်တာ က ခပ်များများ…. အဲ့တော့ သူတို့ မှာ အလုပ်ပီးအောင် လုပ်ရတယ်… အဲ့တော့ လူတိုင်းကို မပြုံးပြနိုင်ရှာဖူး… အိုင်တီ တွေပြုံးပြတယ်ဆိုတာ ပါမွားပါဗျာ… လူအသက်တချောင်းနဲ့ အဝေးကြီး…(နီးတဲ့ကိတ်စလည်းရှိပါတယ်..အဲ့တာကတော့နောက်မှ ပွားပါရစေ…) သူနာပြုတွေ ကို ပြုံးတဲ့မျက်နှာဖုံးလေး တက်ပေးကြပါဆိုပီး ရေးတဲ့ကာတွန်းတွေလည်း ခပ်များများရယ်… သူတို့ လည်း မပြုံးချင်ပဲနေမလား… သူတို့ ဘာကြောင့် မပြုံးနိုင်တာ သိသလား… သွားကြည့်ဖူးသလား… သူတို့စကားသံနားထောင်ဖူးသလား….
ပြောချင်တာက…. ဆေးဝန်ထမ်းဘ၀ ကို လူတိုင်း မစာနာနိုင်သလို… အိုင်တီ ဘ၀ကိုလည်း လူတိုင်းစာနာနိုင်ဖို့ မလွယ်ဖူး….. သူတို့ က များသောအားဖြင့် နည်းပညာဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်သည့်အလျောက်… သူတို့ ပဲ နားလည်တဲ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး… တခါတလေ ရှင်းပြ ဖို့ အချိန် မရှိဖူး… ရှင်းပြလည်း အလကားပဲ… အလုပ်များတဲ့ အတွက်… တခါ တလေ ရှင်းပြတယ်… နားမထောင်ဖူး… ထောင်တော့လည်း အထွန့် တက်တယ်….. ကြားဖူးနားဝ တထွာတမိုက် ညာဏ်လေးတွေနဲ့ဝေဖန်တယ်… အဲ့တော့ ကိုယ်တွေက အချက်ကျကျ ပြန်ထောက်တဲ့… အဲ့ဒီတော့… ဆြာသမားပြောသလိုပဲ… မာနာကြိးတယ်… ဆြာကြီးအထာပေါ့….
မဟုတ်ရပါဗျာ… လုံးဝ မဟုတ်ရပါ….
အိုင်တီဆိုတာ… လူပါပဲ…. သူတို့ လည်း ချစ်တက်ပါတယ်… ပြုံးပြတက်ပါတယ်…. စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်… ကူညီတက်ပါတယ်…. တခါတလေ ပြုံးဖို့ မေ့လောက်အောင် အလုပ်များတာကို နားမလည်ပေးနိုင်တာတော့ မတက်နိုင်ဖူးဗျာ…..
အိုင်တီ ကို ဝေဖန်ချင်ပါသလား…..
သူတို့ ဘာကြောင့် အမြဲမပြုံးနိုင်သလဲ သိချင်ပါသလား…
အိုင်တီ လာ လုပ်ကြည့်ပါလို့ ……